Waalid ilmahooda isweeydaarteen oo maxkamad u kala xukuntay - BBC News Somali
Image caption Shabahuddin iyo xaaskiisa Salma iyo wiilka ay korsadeen Juneyd
Waalidiin ku nool dalka Hindiya ayay maxkamad u kala xukuntay ilmo ay kala dhaleen, balse si aan ku talogal ahayn isu weeydaartay markii ay dhasheen muddo labo sano ka hor ah.
Labadan ilmo ayaa dhashay xili aad isugu dhow hal isbitaal , waxayna kasoo kala jeedaan labo qoys oo kala heysta labo diin oo kala ah Islaam iyo Hindu.
Balse halgan dheer kadib maxkamad ayaa labada qoys ku kala saartay hiddo-sidaha DNA-ga oo laga qaaday carruurta iyo waalidkood, laguna ogaaday ilmo kasta iyo waalidka dhalay.
Balse dhibka jira ayaa ah in ilmihii aysan ogoleyn in ay ka tagaan waalidkii soo korsaday, oo ay raacaan kii sida rasmiga ah u dhalay.
Dhacdadan waxa ay ka dhacday gobolka Asam ee dalka Hindiya.
Koonfurta Hindiya oo laga mamnuucay Pepsi iyo Coca-Cola
Caruusad ninkeeda bistoolad ula soo baxday
Ninka lagu magacaabo Shahabuddin Axmed oo ah mid ka mid ah waalidiinta ayaa sheegay in xaaskiisa Salma Parbin uu dhalmo u geeyay isbitaalka Mangaldai Civil Hospital, 11 March 2015 , markii ay xaaskiisa dhashay maalmo kadib ay u sheegtay in ilmaha ay soo qaateen uusan ahayn koodii, arrintaas oo uu aad ula yaabay.
Image caption Shewali Boro iyo wiilka ay korsatay ee Riyan
Salma ayaa tiri "Biloowgiiba aniga waan shakiyay, markaan arkay wajiga Junaid waxaan soo xusuustay islaan kale oo qolka dhalmada igula jirtay, sababtoo ah wajigeeda oo kale ayuu lahaa, waxa uu leeyahay indho yaryar, mana jiro qof qoyskeena ka mid ah oo indhahaas oo kale leh".
Markii uu shakiga xaaskiisa ku wargaliyay mas'uuliyiinta isbitaalka, waxa ay u sheegeen in xaaskiisa ay waalantahay, una baahantahay dhaqtar, balse isaga ma uusan quusanin, wuxuuna geystey arji ah in uu helo macluumaadka dumarkii habeenkaas ku dhalay isbitaalka, isaga oo isticmaalaya qodobka dastuurka ka mid ah ee la yiraahdo "xaqa muwaadhinka ee helitaanka xogta dowladda".
Waxaa muddo kadib loosoo daabacay magacyada 7 dumar oo isku mar ay isbitaalka ku dhaleen Salma, wuxuuna liiska ka xushey haweenay Hindu ah oo ay isku sifo dhawaayeen ilmahooda, labaduba waxa ay ahaayeen lab, culeeskoodana wuxuu ahaa 3kg, waqtiga ay kala dhasheena waxaa u dhaxaysay 5 daqiiqo oo kaliya.
"Warqad ayaan u qorey reerkii kale, waxaan u sheegay shakiga xaaskayga, waxaan iyagana weeydiiyay in ay sidoo kale shakiyeen, waxaanan meesha ku qorey nambarka taleefoonkayga, kana codsaday in ay isoo wacaan" ayuu yiri Shahabuddin.
Qoyska kale ee Hinduuga oo kala ah Anil Boro oo aabaha ah iyo Shewali Boro ayaa ku nool tuulada Riyan Chandra oo 30km u jirta halka ay degenyihiin qoyska kale ee islaamka ah.
Qoyska reer Boro waxbo kama aysan shakin illaa warqadda reerka kale ay heleen, markii ay kulmeen ayaysa wax kasta u kala cadaadeen "Markii aan arkay Juneyd ayaanba gartay, aabihiis ayuu aad ugu egyahay, anaga waxaan nahay qabiilka Bodo, mana u ekin dadka Assamese iyo musliimiintaba, indhaheena kor ayay u jeexanyihiin, gacmaha iyo dhabanada waan ka cayilanahay, waan ka duwanahay kuwa kale, dadka reer Mangolia ayaan shabahnaa" ayay tiri Shewali Boro.
Salma Pardin ayaa iyaduna sheegtay in markii ay aragtay wiilkeeda Riyan ay markiiba aqoonsatay, waxayna rabtay in ay markiiba kala badashaan, balse waxaa arrinkaas diiday Riyan ayeeyadiis oo ah hooyada dhashay Anil Boro.
Image caption Anil Boro iyo xaaskiisa Shewali Boro
Shahabuddin ayaa mas'uuliyiinta isbitaalka ka codsaday in ay ilmaha u kala badalaan labada qoys, balse kalkaalisooyinkii habeenkaas shaqada ku jirey ayaa beeniyay in ay wax qaldanba sameeyeen.
Kadib ayuu tijaabo dhiig ah ama hiddo-sidaha DNA u direy sheeybaarka, natiijadana waxa ay noqotay in xaaskiisa Salma aysan dhalin ilmaha ay heystaan ee Junayd.
Markii uu natiijadii u geeyay isbitaalka markale waa ay diideen, waxayna u sheegeen in sharci ahaan arrintan aan la aqbali karin.
Kadib ayuu furtay gal dacwadeed oo booliiska ah, waxaana kiiska gacanta ku dhigay isbatoore Hemanta Baruah oo BBC-da u sheegay in uu baaray dacwadda, booqday isbitaalka ay ilmaha ku dhasheen iyo labada qoysba.
Markale ayuu dhiigga ka qaaday labada ilmoodba, wuxuuna geeyay sheeybaar. Isaga oo natiijada heley bishii Novembar sanadkii hore, waxayna cadaysay in ilmaha ay isweeydaarteen, wuxuuna kula taliyay Mr Shabahuddin in uu aado maxkamad si ay u qasabto in ay ilmaha ay kala badashaan labada qoys.
Balse markii lasoo gaaray 4-tii Janaayo, lana yimid maxkamad oo carruurtii la kala badali lahaa, ilmihii ayaaba diiday in ay raacaan waalidiintii kala dhalay, waxayna ku dhageen kuwii soo korsaday.
Qoysaskan ayaa go'aansaday in ay kala hesytaan ilmaha inta ay ka fahmayaan waxa dhacaya, si uusan usoo gaarin dhaawac maskaxeed.
Waxa kale oo ay go'aansadeen in ay si joogto ah u kulmaan si ay isu bartaan, hadhoowna caruurta marka ay weeydaanaan in ay iyaga go'aansadaan dhinaca ay aadayaan.